သက်ငြိမ်ယဉ်ကျေးမှုဆီသို့ မျက်နှာမူခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
History » သက်ငြိမ်ယဉ်ကျေးမှုဆီသို့ မျက်နှာမူခြင်း	14
Posted by Thint Aye Yeik on Apr 14, 2016 in History, My Dear Diary | 14 comments
သပြေခက်နဲ့ချည်း ရေပက်ကြမှလို့ မဆိုလိုပါဘူး။
မီးသတ်ပိုက်နဲ့ စူးရှနာကျင်အောင် မပက်ဘူး
ဆိုပါစို့. . .
ကျောကော့အောင် ခွက်စောင်းခုတ်တာတွေ မလုပ်ကြဘူးဆိုပါစို့. . .
ခေါင်းကနေရေလောင်းတာတို့ မျက်စိတွေ နားရွက်တွေထဲထိ ခံရခက်အောင် ပက်တာတို့ မလုပ်ဘူးဆိုပါစို့။
အမူးအရူးတွေရဲ့ ရိုင်းပြခက်ထန်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ မရှိဘူး ဆိုပါစို့. . .
ယာဉ်မတော်တဆမှုတွေ. . .ရန်ပွဲတွေ. . . မရှိဘူးဆိုပါစို့။
အဲ့ဒါလေးတွေ မရှိဘူးသာ ဆိုရင်ပေါ့ဗျာာာာ
ကျနော် ဒီသင်္ကြန်မှာ လမ်းပေါ် ထွက်လာမှာ. . .
လမ်းပေါ် ထွက်ရမှာကို စိတ် မပါရေးချ မပါဘဲ. . .
အိမ်ထဲမှာပဲ . .
စာအုပ်တွေ. . .
သီချင်းတွေ . . .
နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေ. . . တစ်ကိုယ်ရည်အတွေးတွေနဲ့ပဲ. . .
အဲ့ဒီ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပဲ နေ နေမိတယ်ဆိုပါတော့။
၂၀၁၆၊ ဧပြီ ၁၄
kai says: ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ လူကလုပ်တာဖြစ်ပြီး.. စီးမျောနေရပါတယ်..။
ဖြစ်ချင်တာ..ဖြစ်ချင်သလို… ကိုယ်တိုင်အိမ်အပြင်ထွက်…ကလေး..လူငယ်တွေစည်းရုံး… စလုပ်ကြည့်လေ..။
နောက် အနှစ်၂၀အကြာမှာ ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားမပေါ့..။ သိပ်တော့လည်း..စိတ်မပူနေပါနဲ့..
မြန်မာတွေရဲ့.. ဒီခြေလှမ်းတွေနဲ့..ဆက်သာသွား.. ပူနွေးလာတဲ့ကမ္ဘာမှာ.. ပင်လယ်ရေကမြင့်တက်..။ ဆည်မရှိတဲ့မြစ်တွေကသေနဲ့…
ရန်ကုန်.. နှစ်၅၀မခံ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12169
Thint Aye Yeik says: ရန်ကုန် = နှစ်ငါးဆယ် မခံ
တကယ်က အခုတောင်မှ ရန်ကုန်မြေကို ခွါချင်နေပြီရယ်
uncle gyi says: ဟုတ်တယ်သင်္ကြန်ကရိုင်းနေတာကြာပြီ
Thint Aye Yeik says: .ကြည့်ရတာတော့
အခု လမ်းပေါ် ထွက် ကဲနေသူတွေကတော့ ပြင်ပေးမယ့်ပုံ မပေါ်ဘူး
ဆိုတော့ အခု အိမ်တွင်းပုန်းနေတဲ့သူတွေ အကုန် ထွက် ပြင်ရမယ်ထင့်
ခက်တာက သင်္ကြန်ဆို အပြင်ကို မထွက်ချင်တော့တာပဲ
ခင်ဇော် says: ဒီနှစ်တော့ ဟိုလို သရုပ်ပျက်တွေ အတွေ့ရနည်း သလားပဲ။
Thint Aye Yeik says: ဟုတ်လား… သိတောင် မသိ… Was this answer helpful?LikeDislike 6346
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ယဉ်ဖို့တွက် တစ်အူးချင်းစီမှာ တာဝန်စိတယ်
နည်းပြကောင်းယုံနဲ့မပြီး တစ်ဦးချင်းစွမ်းရည်လဲ ကောင်းမှ
Thint Aye Yeik says: အနော်နဲ့ ဖွေးဖွေး ကျတော့… နှစ်ယောက်တစ်တွဲကြီး..တာဝန် ရှိတယ်။
အနော်နဲ့ ဖွေးဖွေး လက်ထပ်ပြီးတဲ့အခါ… သားသား မီးမီးလေးတွေ မွေးလာတဲ့အခါ…
လုံလုံခြုံခြုံ ဝတ်စားဆင်ယင်ခိုင်းမယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ငယ်တုန်းက လိပ်ခုံး ရှေ့က ပညာရေးမဏ္ဍပ် မှာ ထိုင်လေ့ရှိတယ်။ ပိုက်ကိုင် ရင်တော့ အလိုလို စိတ်ရိုင်းဝင်လာပြီး ဗျင်းချင်တာဘဲ သိတော့တယ်။
တစ်ခါကပေါ့။ :-) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12169
Thint Aye Yeik says: ကျနော် ငယ်ငယ်က ကျတော့…
မဏ္ဍပ် ထိုင်ရတာထက်… ကားနဲ့ လျှောက်လည်ရတာကို ပိုသဘောကျခဲ့ဖူးတယ်… အခုကျတော့…
ဘယ်မှ မထွက်ရတာကို ပိုသဘောကျ သွားတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1374
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဟိုဘက်ပို့စ် က လေးပေါက် ပြောသလို သင်္ကြန်မှာ ရေ ဘယ်လိုခပ်မလဲ စဉ်းစားပါ ဦးလေး။ မဏ္ဍပ်နား ဘီယာ သွားရောင်းရင်တောင် သင်္ကြန်ရက်တွင်း ၃သိန်းလောက်မြတ်သွားတဲ့ လူရှိတယ်။
Thint Aye Yeik says: ဒါလည်း ဟုတ်သားးး
အခုမှ တွေးမိတယ်။ မနက်ဖြန် တစ်ရက်ကျန်သေးတယ်။
အောင် မိုးသူ says: သက်ငြိမ်ကတော့ ကြိုက်တယ်။